Remix OS haizopedzisira yasvika kumakomputa edu | Linux Vakapindwa muropa
Remix OS haizopedzisira yasvika kumakomputa edu
Isu tanga tichitaura newe nezve chirongwa chitsva kwemwedzi chinosanganisira kuunza Android, Google's operating system, kumakomputa uye malaptop. Iyi purojekiti yainzi Remix OS, chirongwa chakatsigirwa nekambani Jide Technology.
Iyi kambani ine kuziviswa nezuro chii chirongwa ichi chinosiiwa nekambani uchifarira akaomesesa uye anonakidza mabhizinesi mapurojekiti ekambani
Panguva ino Jide haisimbise kubviswa kwakazara kweprojekiti asi ichave yakatsaurirwa kune mhinduro dzebhizinesiNdokunge, ivo vanokwanisa kuunza Remix OS (kana forogo yayo) kumakambani, asi kwete kupedzisa vashandisi.
Iyi nhau yakagara sechirongo chemvura inotonhorera kunharaunda yemahara iyo yaida kuve neAroid pamakomputa avo. Zvino chinhu chakadai chinofanirwa kuitwa kuburikidza ne AndroidX86 chirongwa, chirongwa chepamutemo chinoita kuti zvikwanise kuisa Android paPC kana pamakomputa ane mapuratifomu akafanana.
Remix OS, senge Android, yakavakirwa paGnu / Linux kernel. Nekudaro, mapurojekiti maviri aya anotsigirwa nemakambani kwete nenharaunda, mamiriro akaita kuti Remix OS isisakwanise kuvashandisi vekumba uye zvinogona zvakare kuva izvo rimwe zuva zvichatisiya tisina mafoni kana mapiritsi, kana Google ikafunga bvisa rutsigiro rwechirongwa.
Jide haana kungo zivisa nezvekuguma kweprojekti asi zvakare akaudza kuti vese vatengi vekambani, avo vakatenga zvishandiso ne Remix OS, vachadzorerwa mari yavo, pasina mushandisi kuita chero chinhu. Izvi hazvizokanganisa chete vatengi veiyo Jide online chitoro asiwo Ichasanganisira vashandisi veKickstarter chikuva chevanhu vazhinji mari yekubhadhara mari.
Ini pachangu ndakashamisika nenhau idzi, asi zvakare mumwe muenzaniso zvakare unofungidzirwa kuti "mahara" mapurojekiti akabatana nemakambani haawanzo kuva nemagumo akanaka uye muzviitiko zvakawanda mushandisi wekupedzisira ndiye anobhadhara mhedzisiro. Asi zvirokwazvo izvo Remix OS ichaenderera neimwe nzira Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Remix OS haizopedzisira yasvika kumakomputa edu
Manuel Nervion akadaro
Android paPC haina kuita mushe kana kushandisa, senge chero sisitimu kana chirongwa chefoni, iri kutambisa zviwanikwa uye ergonomics inopihwa nekombuta yakazara.
Pindura kuna Manuel Nervión
Kune avo vanotarisira mhinduro ye Android yakaenzana kana kuti iri nani pane iyo inopihwa neREMIX OS, ini ndinokurudzira PhoenixOS, unogona kuikanda yePC (X86) kana Tablet (ARM) kubva pane inotevera link.
Lifehacker Pack: paki yezvakakosha maapplication eLinux